၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အီသီယိုးပီးယားရှိကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကူးစက်ရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis သည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Volume ကို 2019, အပိုဒ် ID ကို 4852130, 8 စာမကျြနှာ
, 1 Tebikew Yeneabat,2နှင့် Yohannes Amare3
စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဆေးပညာကောလိပ်နှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, Gondar တက္ကသိုလ် Gondar, အီသီယိုးပီး၏ 1Department
သားဖွား, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်, Debre ဒုတိယပိုင်းတက္ကသိုလ်, Debre ဒုတိယပိုင်း, အီသီယိုးပီး၏ 2Department
Internal Medicine, ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်, Gondar တက္ကသိုလ် Gondar, အီသီယိုးပီး၏ 3Department
နောက်ခံသမိုင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်း-ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြား, မလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးအန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်နေကြတယ်အဖြစ်ဆက်လက်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်အာဖရိကအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆယ်ကျော်သက်အေအိုင်ဒီအက်စ်-related သေဆုံးမှုတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ရောဂါတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းများ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (PRISMA) သတင်းပို့၏လမ်းညွှန်ထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်ကျနော်တို့ဆောင်းပါးကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော PubMed, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အာဖရိက-wide, Google ကကြိုတင်ရှာဖွေမှု, Scopus နှင့် EMBASE အဖြစ် databases ကိုစာပေရှာဖွေရေးများအတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များအတွက်ကျပန်းသက်ရောက်မှုမော်ဒယ် Meta-analysis သည်နှင့် 95% CI ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ် အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြ၏ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခန့်မှန်းခြေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ PROSPERO မှတ်ပုံတင်နံပါတ် CRD42018109277 ဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ်။ 18 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ 10,218 လေ့လာမှုတစ်ဦးကစုစုပေါင်းဒီ Meta-analysis သည်အတွက်ဝိုငျးခဲ့ကြသည်။ ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ခန့်မှန်းရေကူးကန်ပျံ့နှံ့ 41.62% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထီးဖြစ်ခြင်း [OR: 2.35% နှင့်အတူ 95, (CI; 1.20, 4.59)], အရက်ကိုအသုံးပြုဖို့ [OR: 2.68, 95% CI နှင့်အတူ; (1.67, 4.33)] နှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် [OR: 4.74% CI နှင့်အတူ 95, (3.21, 7.00)] အပြုသဘောအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
နိဂုံးနှင့်ထောက်ခံချက်။ ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြင့်မားခဲ့သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအထီးလိင်, အရက်အသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူကျောင်းသားများအတွက်အထူးအာရုံစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  အကာအကွယ်မဲ့အင်္ဂါဇာတ်, ပါးစပ်, ဒါမှမဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်း-ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြား, မလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးအန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်နေကြတယ်အဖြစ်ဆက်လက်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌, တစ်နေ့လျှင် 14,000 အသစ် 95% ရှိကြ၏ထက်ပို HIV ပိုးကကူးစက်နေကြ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်။
တကမ္ဘာလုံးနှင့်အာဖရိကအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆယ်ကျော်သက်အေအိုင်ဒီအက်စ်-related သေဆုံးမှု  တိုးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ဖို့လူငယ်များရဲ့အားနည်းချက်တိုးမြှင့်အချက်များဆင်းရဲမွဲတေမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအာဏာမရှိခြင်း, အကြမ်းဖက်မှု, ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအလေ့အကျင့်အဖြစ်ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့်ကျားမညီမျှမှုတို့ပါဝင်သည်။ တဦးတည်းရလဒ်အရောင်းအဝယ်အမျိုးသမီးတွေသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတွေပိုက်ဆံများအတွက်လိင်ဖလှယ်ဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝ, ကျောင်းကကျူရှင်, အစားအစာ, သို့မဟုတ်အိမ်ရာ [2, 4] ဖြစ်ပါတယ်။
ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့ယူဂန်ဒါ  ဘော့ဆွာနာ  အတွက်နိုင်ဂျီးရီးယား  တွင် 6% နှင့် 63.9% အတွက် 7% ရှိကြ၏။
အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်အပျော်အပါး, သိချင်စိတ်, သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးကျေးဇူး [8, 9] ခဲ့ကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 19 သန်းအသစ်များကိုကာလသားရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်: ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ထက်ဝက်ခန့် 15 မှအသက် 24 ။ အကြောင်း 750,000 ဆယ်ကျော်သက်  နှစ်စဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်  စိတ်ကျရောဂါ, ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမရှိခြင်းနှင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများ, မျိုးစုံအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်အတူဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်အကျိုးဆက်, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု, စိတ်ရောဂါ, သတ်သေ, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း, ပညာသင်နှစ်ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခံရ [12, 13] ။
အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအချက်များ , [15, 16] အရက်မသောက်အထီး  ဖြစ်ခြင်း, ရွယ်တူချင်းဖိအား [18, 18] နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုခဲ့ကြသည်။
ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများဖြစ်ပွားမှုများအတွက်အရေးပါကာလမှာဖြစ်သော်လည်းပဲနည်းနည်းအာရုံကိုပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ခန့်မှန်းရေကူးကန်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များအရေးပါဖြစ်ကြသည်။
စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (PRISMA)  အစီရင်ခံ၏လမ်းညွှန်ထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်ကျနော်တို့ဆောင်းပါးကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော PubMed, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အာဖရိက-wide, Google ကကြိုတင်ရှာဖွေမှု, Scopus နှင့် EMBASE အဖြစ် databases ကိုစာပေရှာဖွေရေးများအတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါဝေါဟာရများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု. PubMed ၌အကြှနျုပျတို့၏ရှာဖွေရေးကောက်ယူ: "ပျံ့နှံ့ OR ရောဂါ OR ပြင်းအား OR ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ OR အန္တရာယ်များအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ OR ခန့်မှန်း OR ဆုံးအဖွတျ OR အန္တရာယ်အချက်များနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း OR ပိုမိုမြင့်မားအဖွဲ့အစည်း OR တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းသားများကို OR ကျောင်းသား OR သင်ယူသူ OR သင်ယူသူနှင့်အီသီယိုးပီး OR အဲသယောပိ။ "အခြား databases ကို, ကြှနျုပျတို့အသီးအသီး databases ကိုများအတွက်အကြံပေးအဖြစ်ဦးတည်တိကျတဲ့ဘာသာရပ်များအလုပ်။ ထို့အပြင်အခြားဆက်စပ်စာပေကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့ကိုယ်တိုင်အရည်အချင်းပြည့်မီဆောင်းပါးများ (ပုံ 1) ၏ရည်ညွှန်းစာရင်းများကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။
ပုံ 1: သုတေသနဆောင်းပါးများကို 2018, ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပုံကိုဖေါ်ပြခြင်း Flow ဇယား။
2.1 ။ အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်
နှစ်ဦးကသုံးသပ်ရေး (TA နှင့် ty) ကြိုတင် Full-စာသားကိုဆောင်းပါးပြန်လည်ရယူခြင်း၎င်းတို့၏ခေါင်းစဉ်နှင့် abstraction သုံးပြီးသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများအကဲဖြတ်။ အဆိုပါထုတ်ယူ Full-စာသားကိုဆောင်းပါးများကိုထပ်မံ prespecified ပါဝင်နဲ့ဖယ်စံနှင့်အညီပြသခဲ့ကြသည်။ ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုမှရှောင်ရှားရန်, စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်သုတေသနစုပေါင်းများအတွက်ဟန္န Briggs Institute ကစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအသုံးပြုခဲ့သည်, တကျိပ်တပါးသော  ထဲကကိုးသွင်းယူခဲ့သော။ ကျနော်တို့ကတတိယရှိ reviewer (YA) နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုများပြေလည်။
2.1.1 ။ Inclusion လိုအပ်ချက်
သြဂုတ်လ 2009 ဇန်နဝါရီလမှ, 2018 ကနေအီသီယိုးပီးလေ့လာတစ်နှစ်၌ပြစ်မှားမိကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအလေ့လာရေးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပြင်းအားသတင်းပေးပို့ပေးသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာရေးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်အပိုဒ်အတွက်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းအမျိုးအစား-Cross-Section လေ့လာမှုဘာသာရပ်-ကျောင်းသားများကို
2.1.2 ။ ဖယ်လိုအပ်ချက်
အက္ခရာများ, သုံးသပ်ချက်များ, နှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများနှင့်ထပ်လေ့လာမှုများဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
2.2 ။ ဒေတာများကို Extraction နှင့်အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဘို့နည်းလမ်းများ
ကျနော်တို့များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများဖြည်ရန်စံချိန်စံညွှန်းမီဒေတာထုတ်ယူခြင်းပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဖြည်ချလေ့လာပါဝင်သည်: အကိုပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာများ၏အမည်, ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ, လေ့လာမှုဒီဇိုင်းဆက်စပ်အချက်များ, နမူနာအရွယ်အစား, လေ့လာမှုအပြင်အဆင်များ, အန္တရာယ်ခန့်မှန်းချက် (OR) အတွက်ချိန်ညှိရှက်ကြောက်လျက်, 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ။ အရင်းအမြစ်စာရွက်စာတမ်းများမှဒေတာများထုတ်ယူသုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်လွတ်လပ်စွာပြုလေ၏။ သဘောထားကွဲလွဲမှုများသဘောတူညီမှုအားဖြင့်ပြေလည်ခဲ့ကြသည်။
ထည့်သွင်းလေ့လာမှုတွေ၏အရည်အသွေး  ကနယူးကာဆယ်-Ottawa စကေး (NOS) ကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ နမူနာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အရွယ်အစား, သင်တန်းသားများအကြားနှိုင်းယှဉ်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသိရှိနိုင်ရန်နှင့်စာရင်းအင်းအရည်အသွေးကို NOS ၏ domains များဖြစ်ကြသည်တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှု၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုသည်။ အခွင့်အလမ်း (unweighted Kappa) ကျော်လွန်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်နှင့်သဘောတူညီချက်သုံးခုသုံးသပ်ရေးတို့တွင်သဘောတူညီချက်အကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ 0-0.01 အဖြစ်နီးပါးစုံလင်သောသဘောတူညီချက် [0.20] သိသိသာသာသဘောတူညီချက်အဖြစ်အလယ်အလတ်သဘောတူညီချက်, 0.21-0.40 အဖြစ်တရားမျှတတဲ့သဘောတူညီချက်, 0.41-0.60 အဖြစ်အနည်းငယ်သဘောတူညီချက်, 0.61-0.80 အဖြစ်တန်ဖိုး 0.81 ဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့သဘောတူညီချက်, 1.00-22 စဉ်းစားပါနှင့်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, အခွင့်အလမ်းကိုကျော်လွန်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်နှင့်သဘောတူညီချက်နီးပါးစုံလင်သောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သော 0.82 ဖြစ်ခဲ့သည်။
2.3 ။ ဒေတာကို Synthesis နှင့်သုံးသပ်ခြင်း
STATA version14 software ကို 95% CI နှင့်အတူစုစုပေါင်းခန့်မှန်းပြ Meta-analysis သည်နှင့်သစ်တောမြေကွက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါခြုံငုံရေကူးကန်ပျံ့နှံ့  ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု Meta-analysis သည်အားဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမေးစာရင်းဇယားနှင့် I2 စာရင်းဇယား  သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများအကြားစာရင်းအင်းသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ပြင်းအား 2%, I25 စာရင်းဇယားနှင့် 50% တန်ဖိုးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် 75%  အသီးသီးနိမ့်, အလတ်ကိုကိုယ်စားပြုဖို့စဉ်းစား, မြင့်ခဲ့ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဒေတာမှာ I2 စာရင်းဇယားတန်ဖိုး 97.1 ခဲ့သည်
မြင့်မားတဲ့ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရှိခဲ့ပြသခဲ့သည်ထားတဲ့တန်ဖိုးကို≤ 0.001 ။ ထို့ကြောင့်, ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ meta-ဆုတ်ယုတ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ဖြစ်နိုင်ခြေအရင်းအမြစ်စူးစမ်းလေ့လာစေခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းအကြား-လေ့လာမှုသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကွိုးစားအားထုတျသောသော့ချက်လေ့လာမှုများအကဲဖြတ်ရန် sensitivity ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထဲကခွင့်-One ထွက်သယ်ဆောင်။ ထုတ်ဝေဘက်လိုက်မှုကတော့ကြံစည်မှုနှင့် Egger ရဲ့ဆုတ်ယုတ်စမ်းသပ်မှုများကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမထုတ်ဝေဘက်လိုက်မှုရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအင်္ဂါရပ်များ: အားလုံးလေ့လာမှုများသီယိုးပီးယားအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသုတေသနလေ့လာမှုဒီဇိုင်း Cross-Section ကြီးနှင့်ဆယ်ရှစ်ဆောင်းပါးများ (စားပွဲတင် 1) ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင် 1: အအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်စပ်သောကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှု, အီသီယိုးပီး, 2018 ။
3 ။ ရလဒ်
18 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ 10,218 လေ့လာမှုတစ်ဦးကစုစုပေါင်းဒီ Meta-analysis သည်အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ အီသီယိုးပီးများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောစာပေ၏အဆိုအရအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့% 23.3 မှ 60.9% မှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ခန့်မှန်းရေကူးကန်ပျံ့နှံ့ 41.62 95% CI (36.15, 47.10) (ပုံ 2) နဲ့% ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပုံ 2: အီသီယိုးပီး 2018 အတွက်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခန့်မှန်းပျံ့နှံ့။
3.1 ။ ကျောင်းသားများအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့၏အဖွဲ့ခွဲအားသုံးသပ်ခြင်း
ပုံ3အဖွဲ့ခွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မှစ. ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်အကြားပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ဖြစ်နိုင်သောအရင်းအမြစ်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများကဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခန့်မှန်းရေကူးကန်ပျံ့နှံ့အသီးသီး 40.65% နှင့် 42.12% ရှိကြ၏။
ပုံ 3: အီသီယိုးပီး, 2018 အတွက်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခန့်မှန်းပျံ့နှံ့၏အဖွဲ့ခွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသစ်တောကြံစည်မှုလက်ဆောင်။
3.2 ။ ကျား Difference နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
ပုံ4မှစ. ခုနစျပါးဆောင်းပါးများစုစုပေါင်းဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ကျား, မများနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့သည်။ အထီးဖြစ်ခြင်း 2.35 ခဲ့ [OR: 2.35% နှင့်အတူ 95, (CI; 1.20, 4.59)] အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆပိုမိုဖွယ်ရှိ။
ပုံ 4: သစ်တောကြံစည်မှုသီယိုးပီးယား, 2018 အတွက်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်ဆက်စပ်သောယောက်ျား၏ရေကူးကန်ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (OR) တင်ဆက်ထားပါတယ်။
3.3 ။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
ပုံ5မှစ. သုံးဆောင်းပါးများ built-in ခဲ့ကြသည်ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ 2.68 2.68% CI နှင့်အတူ, သူတို့၏အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလေ့အကျင့်အဘို့အရက်ကလွှမ်းမိုးခဲ့ကြသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ 95 [OR ခဲ့ကြသည် (1.67, 4.33)] ကြိမ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိ။
ပုံ 5: အီသီယိုးပီး, 2018 အတွက်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် nonalcohol အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောရေကူးကန်ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (OR) အရက်သေစာအသုံးပြုမှုတင်ဆက်ထားပါတယ်သစ်တောကြံစည်မှု။
3.4 ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကဲခတ်
ပုံ6မှစ. သုံးဆောင်းပါးများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ 5% CI အတူ 4.74; ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူတစ်ဦးချင်းစီ 95 [OR အကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် (3.21, 7.00)] ဆတန်ပြန်အစိတ်အပိုင်းများထက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိ။
ပုံ 6: အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ညစ်ညမ်း၏ nonwatching နှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းကြည့်ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (OR), 2018 တင်ဆက်ထားပါတယ်သစ်တောကြံစည်မှု။
ဒီလေ့လာမှုမှာ, တဆယ်ရှစ်ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ ဤအတဆယ်နှစ်လုံးကိုလေ့လာမှုများခြောက်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအရှိကြ၏သော်လည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအရှိကြ၏။ အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့ 23.3% ကနေ 60.9% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခန့်မှန်းရေကူးကန်ပျံ့နှံ့အသီးသီး 40.65% (28.99, 52.30) နှင့် 42.41% (35.68, 48.57) တို့ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခြုံငုံခန့်မှန်းခြေရေကူးကန်ပျံ့နှံ့ 41.62 (36.45, 47.10)% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်နိုင်ဂျီးရီးယား  နှင့်ဘော့ဆွာနာ  ၌ပြစ်မှားမိလေ့လာမှုထက်နိမ့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်ယူဂန်ဒါ  ၌ပြစ်မှားမိလေ့လာမှုထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အဆိုပါခြားနားချက် (ယူဂန်ဒါအတွက်နမူနာအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့သော 261 ခဲ့) နမူနာအရွယ်အစားဖြစ်လိမ့်မယ်။
အဲသယောပိကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအချက်များအထီးဖြစ်ခြင်းခဲ့ကြသည် 2.35 ခဲ့ [OR: 2.35% နှင့်အတူ 95, (CI; 1.20, 4.59)] အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကထောက်ခံခဲ့သည့်အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ  ။ 2.68 2.68% CI နှင့်အတူ, သူတို့၏အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလေ့အကျင့်အဘို့အရက်ကလွှမ်းမိုးခဲ့ကြသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ 95 [OR ခဲ့ကြသည် (1.67, 4.33)] ကြိမ် [14, 15] ကထောက်ခံခဲ့သည့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိ။ ညစ်ညမ်းအကဲခတ်လည်းအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါးစောင့်ကြည့်ခံရပေလိမ့်မည်။
5 ။ နိဂုံးနှင့်ထောက်ခံချက်
ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြင့်မားခဲ့သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအထီးလိင်, အရက်အသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူကျောင်းသားများအတွက်အထူးအာရုံစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
စာရေးဆရာ '' အလှူငှမြေား
TA နှင့် ty ကြိုတင် Full-စာသားကိုဆောင်းပါးပြန်လည်ရယူခြင်းမှသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်သုံးပြီးဆောင်းပါးများနှင့် abstraction အကဲဖြတ်။ အဆိုပါထုတ်ယူ Full-စာသားကိုဆောင်းပါးများကိုထပ်မံ prespecified ပါဝင်နဲ့ဖယ်စံနှင့်အညီပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာတတိယဝေဖန်သုံးသပ် YA နှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုများပြေလည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်တွင်ထည့်သွင်းသုတေသနစက္ကူအားလုံးစာရေးဆရာများကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
C. Glen-Spyron, ဆယ်ကျော်သက်, Belia Vida စင်တာ, နမီးဘီးယား, 2015 အတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
လိင်ကျန်းမာရေး Defining ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့: လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာတိုင်ပင်၏အစီရင်ခံစာ, 28-31 ဇန်နဝါရီလ 2002, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်, 2006 ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး: လမ်းညွှန်မှုနိုင်ငံအကောင်အထည်ဖော်ရေး, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးဖို့, ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်, 2017 ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, Younger ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး: Developing နိုင်ငံများအတွက်သုတေသနကိစ္စများ: တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်, 2011 များအတွက်နောက်ခံစက္ကူ။
Ke Musiime နှင့် JF Mugisha "ယူဂန်ဒါအာဇာနည်နေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ," ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, vol ။3မရှိ။ 1, စစ။ 1-9, 2015 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
BA ဘွဲ့ Omoteso "အနောက်တောင်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လေ့လာမှုတစ်ခု," ဆိုရှယ်သိပ္ပံ, vol ၏ဂျာနယ်။ 12 မရှိ။ 2, စစ။ 129-133, 2006 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
ME Hoque၊ T. Ntsipe နှင့် M. Mokgatle-Nthabu၊ “ ဘော့ဆွာနာရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ” Gender & Behavior, vol ။ ၁၀ ။ Google Scholar တွင် 10, စ။ 2-4645, 4656. ကြည့်ရန်
ဂျေ Aji, အမ် Aji, C. Ifeadike et al, "နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အလေ့အထများ: တစ်တဆယ်နှစ်လုံးကိုတစ်နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်," ။ Afrimedic ဂျာနယ်, vol ။4မရှိ။ 1, စစ။ 10-16, 2013 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
Z. Alimoradi "ဟုအီရန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအကြားက high-အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့အချက်များပံ့ပိုး: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု," အဝန်း၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်အခြေခံပြီးသူနာပြုနှင့်သားဖွား, vol ။5မရှိ။ 1, စစ။ 2-12, 2017 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
အက်စ်ဟော်ထ "ဟုအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးသက်ရောက်မှု: အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်များ" အမေရိကန်သမားတော်များနှင့်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏ဂျာနယ်, vol ။ 13 မရှိ။ 3, p ။ 88, 2008 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
ဂျေအေ Lehrer, LA က Shrier, အက်စ် Gortmaker နှင့်အက်စ် buka "စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုအမေရိကန်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတစ်ခု longitudinal ခန့်မှန်းအဖြစ်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများ," ကလေးအထူးကု, vol ။ 118 မရှိ။ 1, စစ။ 189-200, 2006 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
MJ Jorgensen, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အထွေထွေငယ်ရွယ်လူဦးရေ-အချက်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, Aarhus တက္ကသိုလ်မှ Aarhus, ဒိန်းမတ်, 2014, Ph.D ဘွဲ့ကို စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။
PJ Bachanas, MK မောရစ်, JK Lewis က-Gess et al, "အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများခန့်မှန်း: ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ," ။ ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, vol ။ 27 မရှိ။ 6, စစ။ 519-530, 2002 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ML Cooper က "အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အသက်သေအထောက်အထားအကဲဖြတ်," အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်, ဖြည့်စွက်မရှိ။ 14, စစ။ 101-117, 2002 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
အက်စ်ရီအက်စ် Tuot, K. Yung, အက်စ်ကင်မ်, C. Chhea နှင့် V. Saphonn "ကမ္ဘောဒီးယားအတွက်တစ်ကိုယ်ရေအများဆုံး-မှာ-အန္တရာယ်လူငယ်များအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ," ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ် သုတေသန, vol ။2မရှိ။ 5, စစ။ 211-220, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
ဂျေ Menon, အက်စ် Mwaba, K. Thankian နှင့် C. Lwatula, "တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူ," အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ STD သုတေသန & ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, vol ။ ၄ ။ ထုတ်ဝေသူမှာ ၁၊ စစ။ ၁-၇၊ ၂၀၁၆ ။ Google Scholar တွင်ကြည့်ရန်
အဲန်ဒီ Ngidi, အက်စ် Moyo, T. ဇူလူ, JK အာဒံနှင့် SBN Krishna က "Kwazulu-Natal အတွက်အာဖရိကကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူ impact ကြောင့်ရွေးချယ်ထားသည့်လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်, တောင်အာဖရိက," ဆာဟာရ-J ကို: များ၏ဂျာနယ် HIV / AIDS ရောဂါ, vol ၏လူမှုရေးရှုထောင့်။ 13 မရှိ။ 1, စစ။ 96-105, 2016 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
YF Adeoti, INCEDI 2016 ညီလာခံ, အက်ခရာ၏ရှေ့ဆက်မည်ဂါနာ, သြဂုတ်လ 2016 ထဲမှာ "Osun ပြည်နယ်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလွှမ်းမိုးအချက်များ Predisposing" ။
ဃမော်ဟာ, အေ Liberati, ဂျေ Tetzlaff နှင့် DG Altman "ပိုမိုနှစ်သက်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အဘို့အပစ္စည်းများကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့် Meta-လေ့လာဆန်းစစ်: အ PRISMA ကြေညာချက်" Internal Medicine, vol ၏ရာဇဝင်။ 151 မရှိ။ 4, စစ။ 264-269, 2009 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
K. Porritt, ဂျေ Gomersall နှင့် C. Lockwood, "JBI's စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်" AJN, သူနာပြုအမေရိကန်ဂျာနယ်, vol ။ 114 မရှိ။ 6, စစ။ 47-52, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
GA Wells, B. Shea, D. O'Connell et al ။ , NewCastle-Ottawa အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ချိန်ခွင် - ဖြစ်ရပ်မှန်ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာခြင်း၊ Belia Vida Center၊ Namibia, 2017 ။
JR လန်ဒီ့ကိုနှင့် GG Koch, "အမျိုးအစားဒေတာအတွက်လေ့လာသူသဘောတူညီချက်များ၏တိုင်းတာခြင်း," biometric, vol ။ 33 မရှိ။ 1, စစ။ 159-174, 1977 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အမ် Borenstein, LV Hedges, JPT Higgins နှင့် HR Rothstein "Meta-analysis သည်များအတွက် fixed-အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျပန်းဆိုးကျိုးများမော်ဒယ်များမှတစ်ဦးကအခြေခံနိဒါန်း" သုတေသန Synthesis နည်းလမ်းများ, vol ။ 1 မရှိ။ 2, စစ။ 97-111, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
JPT Higgins, စင်ကာပူဒေါ်လာ Thompson က, JJ Deeks နှင့် DG Altman "Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်မကိုက်ညီတိုင်းတာခြင်း," BMJ, vol ။ 327 မရှိ။ 7414, စစ။ 557-560, 2003 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
MT Yigzaw, AW Yalew, AB Mesfin နှင့် Demisie AS, "Addis Ababa တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ, Addis Ababa, အီသီယိုးပီးအကြားကဆက်စပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Initiative နှင့်အကြောင်းရင်းများ," ကနျြးမာရေးသုတေသန, vol ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။2မရှိ။ 5, စစ။ 260-270, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
အီး Gemechu, ဆေးပညာကို Global ဂျာနယ်နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, vol "Addis Ababa, အီသီယိုးပီးထဲမှာ Alkan တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အတွက်တစ်ကိုယ်ရေပထမနှစ်တွင် undergraduatestudents တို့တွင်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်" ။3မရှိ။ 2, စစ။ 2277-9604, 2014 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
A. အ Kebede, ခ Molla နှင့်အိပ်ချ် Gerensea "Aksum တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အလေ့အကျင့်၏အကဲဖြတ်, Shire ကျောင်းပရဝုဏ်, Shire မြို့, Tigray, အီသီယိုးပီး, 2017" BMC သုတေသနမှတ်စုများ, vol ။ 11 မရှိ။ 1, p ။ 88, 2018 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
Z. Alamrew, အမ် Bedimo နှင့်အမ် Azage "Bahir Dar စီးတီး, အနောက်မြောက်သီယိုးပီးယားတွင်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား HIV / AIDS ရောဂါရောဂါကူးစက်ဘို့အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ," ISRN ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, vol ။ 2013, အပိုဒ် ID ကို 763051,9စာမျက်နှာများ, 2013 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
ခ Taye နှင့် T. Nuri "Bahir Dar မြို့, အနောက်မြောက်သီယိုးပီးယားတွင်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ပုံမှန်ကျောင်းသားများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ၏အကဲဖြတ်: cross-section လေ့လာမှု," အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟော်ရီကာချာ၏ဂျာနယ်, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံ, vol ။ 1, စစ။ 60-67, 2017 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
အမ် Mekonnen, ခ Yimer နှင့်အေ Wolde "Debre ဒုတိယပိုင်းမြို့မှာအစိုးရမဟုတ်သောပိုမိုမြင့်မားအဖွဲ့အစည်းကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ, မြောက်အနောက်အီသီယိုးပီး," ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုဖွင့် Access ကို, vol ။2မရှိ။ 1, 2013 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
K. Mamo, အီး Admasu နှင့်အမ် Berta "ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့် Debre ဒုတိယပိုင်းတက္ကသိုလ်ပုံမှန်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆက်စပ်နေသောအချက်များ, Debre ဒုတိယပိုင်းမြို့မြောက်အနောက်အီသီယိုးပီး," ကနျြးမာရေး, ဆေးပညာနှင့်သူနာပြုများ၏ဂျာနယ်, vol ။ 33, 2016 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
T. Dingeta, အယ်လ် Oljira နှင့် N. Assefa "အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ဘွဲ့ကြိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူပုံစံများ: cross-section လေ့လာမှု," ပန်အာဖရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။ 12 မရှိ။ 1, p ။ 33, 2012 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
AH Mavhandu-Mudzusi နှင့် TT Asgedom "Jigjiga တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှု, အီသီယိုးပီး," ကနျြးမာရေးလုပ် SA Gesondheid, vol ။ 21 မရှိ။ 1, စစ။ 179-186, 2016 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
G. အ Tura, အက်ဖ် Alemseged နှင့်အက်စ် Dejene, "အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် jimma တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအချက်များ predisposing, အီသီယိုးပီး," ကနျြးမာရေးသိပ္ပံအဲသယောပိဂျာနယ်, vol ။ 22 မရှိ။ 3, စစ။ 170-180, 2012 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
အက်ဖ် Gebresllasie, အမ် Tsadik နှင့်အီး Berhane "Mekelle စီးတီး, မြောက်အီသီယိုးပီးပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အလားအလာခန့်မှန်း," ပန်အာဖရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။ 28 မရှိ။ 1, p ။ 122, 2017 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
A. အ Fantahun, အက်စ် Wahdey နှင့် K. Gebrekirstos, "အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ဘောဂဗေဒကျောင်းသား mekelle တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တို့တွင်အအချက်များ predisposing, Mekelle, Tigray, အီသီယိုးပီး, 2013: section လေ့လာမှုကူး" အဆင့်မြင့်မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေ၏ပွင့်လင်းဂျာနယ်, vol ။3မရှိ။ 1, စစ။ 52-58, 2015 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
TE Yarinbab, နယူးယော့ Tawi, ဗြဲ Darkiab, အက်ဖ် Debele နှင့် WA Ambo "ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ mizan aman ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အချက်များ, အနောက်တောင်ပိုင်းသီယိုးပီးယား: Cross-Section လေ့လာမှု," JOJ သူနာပြုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, vol ။ 8 မရှိ။ 3, 2017 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်
ဒဗလျူ Debebe နှင့်အက်စ်သည်ရှောလမုန်, "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ Madda Walabu တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြား၎င်း၏ဆက်စပ်အချက်များအရှေ့တောင်အီသီယိုးပီး: လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှုကိုအခြေခံသောစက်ရုံ," ကူးစက်ရောဂါ: Open ကို Access ကို, vol ။5မရှိ။ 4, 2015 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
AK Tololu, "အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များကန်းမြို့မှာအင်္ကျီ TVET ကျောင်းသားများအကြား, ဘေးလ်ဇုန်, Oromia ဒေသအရှေ့တောင်အီသီယိုးပီး," MOJ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, vol ။5မရှိ။ 6, 2016 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
EL Negeri, "အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြဌာန်းခွင့်, Nekemte မြို့မှာ Wollega တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား HIV အန္တရာယ်အမြင်နှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးချ, အနောကျပိုငျးသီယိုးပီးယား, တို့အကြားဆက်ဆံရေး" သိပ္ပံ, နည်းပညာနှင့်ဝိဇ္ဇာသုတေသနဂျာနယ်, vol ။3မရှိ။ 3, စစ။ 75-86, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
B. G Yohannes၊ T. Gelibo နှင့် M. Tarekegn၊ “ အီသီယိုးပီးယားတောင်ပိုင်း၊ Wolaita Sodo တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ၊ ” အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဂျာနယ်၊ ၂ ။ Google Scholar တွင် 2, စ။ 2-86, 94. ကြည့်ရန်
A. အဒါဘီ, အမ် Assefa, ဃ Mekonnen, အက်ဖ် Biadglegne "Debre တာဗော်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ, အနောက်မြောက်အီသီယိုးပီး: cross-section လေ့လာမှု," ကနျြးမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, vol ၏အဲသယောပိဂျာနယ်။ 30 မရှိ။ 1, စစ။ 11-18, 2016 ။ Google Scholar မှာကြည့်ရန်